Nintendo waxay lahaan doontaa noocyo kale oo badan oo ah 'Switch' sanduuqyadeeda - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Nintendo waxay lahaan doontaa noocyo kale oo badan oo ah 'Switch' sanduuqyadeeda
Nintendo waxay lahaan doontaa noocyo kale oo badan oo ah 'Switch' sanduuqyadeeda
Nintendo wuxuu umuuqdaa inuu soo gudbay kan labaad marka loo eego aaladaha Nintendo Switch console. 'Switch Lite' ayaa dhowaan imaan doona, waxaana ku xigi doona nooc waxyar ka sarreeya midka hadda jira. Oo waxay umuuqataa in moodello kale la filayo.
Nintendo waxay suuq geyn doontaa 'Switch Lite' ilaa 255 € laga bilaabo 20 Sebtember soo socota. Moodel ka badan kuwa hadda socda ayaa imaan doona dhowaan, malaha xilliga fasaxa haddii xanta la caddeeyo. Iyo Big N kuma talajirto inay halkaa ku joojiso. Shirkadda ayaa ka shaqeyn doonta noocyada mustaqbalka marka lagu daro seddexdan nooc "si loo joogteeyo wareegga nolosha ee boosteejada"Marka loo eego Wall Street Journal taas oo soo xiganaysa ilo gudaha ah. Madaxweyne kuxigeenka Sharp, Katsuaki Nomura, wuxuu sidoo kale siiyay xoogaa tilmaamo ah oo ku saabsan teknolojiyada soo bandhigidda isbeddeladaan mustaqbalka. Sida laga soo xigtay isaga, Sharp wuxuu siin lahaa taayirrada 'IGZO tales' macaamiisha warshadaha ciyaarta fiidiyowga, kaas oo noqon doona Nintendo, sida lagu sheegay warbixin hore oo WSJ ah.
Nintendo wuxuu diyaarinayaa consoles kale
Jeelashaani waxay la mid yihiin kuwa loo adeegsado TV-yada 8K-ta sare ee Sharp iyo taleefannada casriga ah sida R2 - iyo labadiisa ogeysiis -. 'Switch Lite' ayaa diraya shaashadda 720p laakiin nooca ugu sareeya ayaa kor ugu kici kara xalka. Cidina ma oga waqtigaan, haddii moodalkan, ama labadaba, ama midna, uu istcimaali doono Sharp IGZO slab. Waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la sugo sii deynta 20 September Switch Lite, iyo marka dambe moodada sare ee lagu ogaanayo wax walba oo shaashadooda ah.
oo leh Sharp IGZO slabs?
Nintendo ayaa horey u sheegtay inay suuq geyn doonto hal console oo keliya, 'Switch Lite', kahor dhammaadka fasaxa sanadka. Taas ayaa la yiri, Big N wuxuu daaha ka qaadi karaa qorshihiisa mustaqbal ee munaasabada furitaanka bisha Sebtembar 20 ama sameynta ogeysiiskiisa mar dambe. Waqtigaan la joogo, baahida loo qabo qalabka loo yaqaan 'Nintendo Switch console' ayaa umuuqata inaysan dooneynin inuu istaago oo Switch Lite ayaa u imaan laheyd inay sare u qaado iibka xitaa dhamaadka sanadka. Looma baahna console kale macnaha guud. In la raaco!
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/nintendo-aurait-bien-dautres-versions-de-sa-switch-dans-ses-cartons-324728
2018 Taxanaha: liiska tirooyinka la soo raray ama la cusbooneysiiyey
Larusso waxay shaqaaleysiisay socdaalkii Johnny Hallyday: sababta ay ugu mahadcelin karto Laeticia Hallyday
Hindiya: Rahul Gandhi wuxuu u yeeray Raiisul Wasaaraha "BechendraModi" wuxuuna dhahay "iibiya" PSUs si ay u caawiyaan saaxiibadiisa | Wararka Hindiya
7 30 Oktoobar 17h2019 Wargeys - VIDEO
Xaaladda WhatsApp ee jummaal mubarak - VIDEO
DADKA & LIFESTYLE6,193
TECH & TELECOM2,405
Video dheeraad ah2,687